Waxay ku taalaa ee Shunde, magaalada warshadaha cusub ee dhulka miyiga ah ee River Delta Pearl ee xeebta ah ee Shiinaha. Waxaa jecel yahay meesha juquraafi ah faa'iidada badan iyo gaadiid ku haboon. Waxaa bari waa in River Pearl ah, xagga koonfureed ee Zhuhai, galbeed Heshan, iyo xagga woqooyi ugu Guangzhou. The 105 National Highway waxaa mara, iyo Expressway Guangzhou-Shenzhen ku ag marayso, iyo biyo mareen wanaagsan waxa ku wareegsan Chengbo iyo Bilang.
Shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 2011. in ka badan 20 sano oo shaqo adag iyo dadaal u cabbudhinayo ka dib, in tartanka suuqa kulul, sida miisaanka shirkadda sii balaarineysa, ay qaab ay sii kordhayso, iyo suuqa u sii ballaariyo. Dhamaan shaqaalaha shirkadda waxaa had iyo jeer isku diyaarineysa waayo, berri kasta oo cusub, oo ku dadaalaan si ay u siiyaan macaamiisha adeegga ugu qanci karo oo leh xirfado fiican iyo Hababka sheeko.
Maanta, shirkadda waa sida xabbad luul ah oo dhalaalaya, ka ifaysa River Pearl ah, soo jiidashada martida ka adduunka oo dhan ay soo jiidashada gaar ah.
Production waa furaha abuuro macaash. Si dhammaan shaqaalaha siiyaan jawi caafimaad qaba oo wacan wax soo saarka, Company Jingyi ayaa shaaca ka on rogo oo ah "wax soo saarka ilbaxnimada, badbaadada ugu horeysay" oo ma ay fiican.
In wax soo saarka, shirkadda dhiiri hal-abuurnimo. Shirkadda siinayaa dhiirigelin ruuxiga ah iyo qalab shaqaalaha kuwaas oo ku kordhiyeen muhiim ah in qorshaynta ka-soo-saarka oo dhan. wax soo saarka shirkadda ayaa dhaqmayso nidaamka shaqada sideedda saacadood ah si loo hubiyo in shaqaalaha ka shaqeeyo oo naso oo naso. Isla mar ahaantaana, shirkadda ayaa sidoo kale la geeyay baabuur khaas ah si loo fududeeyo shaqaalaha si ay u tagaan in ay ka shaqeeyaan; xoojiyo dacaayad dab, xasuusiyo shaqaalaha ma inay iska ilaawaan ammaanka wax soo saarka; fuliyo tababarka cusub ee xirfadda ka hor inta ardayda, shaqaalaha cusub iyo wasaaradaha maamulka shaqada deegaanka si ay shaqaalaha cusub ka hor intaadan gelin Tababarka warshad si loo hagaajiyo tayada guud ee shirkadda, oo qalabaysan qalab casri ah xafiiska kor u qaadista heerka shaqo; qaybinta joogto ah oo sahay caymiska shaqada, sahla nabad shaqaalaha ee maskaxda si loo soo saaro ...
All of this si toos ah loogu balanqaadayo hawlgalka hufan oo habsami leh ee wax soo saarka shirkadda.
Life iyo wax soo saarka waa sooci karo. Si loo hagaajiyo tayada nolosha ah ee shaqaalaha, Company Jingyi ayaa dhisay shaqaalaha kuleejo iyo caafimaadka makhaayad ku leh daaqadaha heer sare ah iyo waxa daahirka ah, dabaasha iyo dhulka isboortiga ballaaran oo ku haboon ee degaanka ku nool ka mid ah shaqaalaha ka.
Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo xarumaha dadweynaha ee degaanka nool, shineemo, maktabad, hall karaoke, isbitaalka, cafe internet, qolka la waraabiyay kubadda miiska, TV, telefoonka, taageere korontada, nidaamka biyo kululeeyaha qoraxda ... nolosha shaqaalaha taajir ka baxsan shaqeeyaan, ku dar isgaarsiinta Shaqaalaha. Isku day inaad si ay u abuuraan dareen guriga oo kale ah shaqaalaha aad.
In goobta nool, walaalo badan oo walaalahoodii gabdhaha ka soo adduunka oo dhan waa sida qoyska ka mid ah. Qof kasta oo inta badan kor u dhaafsi iyo sii qoto dheereeyaan fahamkooda iyada oo noocyo kala duwan oo hawlaha dhaqanka (sida Mid-Dayrta Festival sanadlaha ah, maalinta sannadka cusub, iyo Maalinta Haweenka). Ahaanshaha waxaa ku jira dadka ay dareemaan farxad iyo diiran.
Address: Room 2-13, jiuwan zone warshadaha, cha magaalada Chung, beijiao magaalada, degmada shunde, foshan magaalada, gobolka cusub ee Guangdong
Guide, Hot Products, Khariidadda bogga, amp Mobile
Outdoor Table Chairs, Outdoor table chair furniture, Modern Outdoor Furniture, Garden dibada Table Guddoomiye , Outdoor Patio Table Chair, Outdoor Aluminum Table Chair,